नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७६ – Ketaketi Online
November 28, 2019 November 29, 2021 Ketaketi OnlineLeaveaComment on नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७६
केटाकेटी अनलाइन संवाददाता रश्मी खागी
३० औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस नोभेम्बर २० को सन्दर्भ पारेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७६ एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनका तथ्यांकले नेपालमा बालबालिका हराउने, यौन हिंसामा पर्ने, बेसहारा हुने तथा बालगृहमा आश्रित हुने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको देखाएको छ । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र, १०४ को तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष २ हजार ३ सय तीस जना बालबालिका हराएकामध्ये एक हजार १७ जना भेटिएका थिए भने एक हजार ३ सय १३ जना फेला परेका थिएनन् । यो संख्या बढेर यस वर्ष हराएका बालबालिकाको संख्या ३ हजार ४ सय २२ पुगेको छ जसमा २ हजार ५ सय ४० जना भेटिएका छन् भने ८ सय ८२ जना अझै भेटिएका छैनन् ।
१४ जिल्लाका ५ सय ३३ बालगृहमा अघिल्लो वर्ष १४ हजार ८ सय ६४ बालबालिका आश्रित थिए जुन संख्या बढेर यस वर्ष १५ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ ।
त्यस्तै सडक बालबालिका मुक्त काठमाडौं उपत्यका अभियानले २०७६ असार मसान्तसम्ममा ९ सय ३ बालक र एक सय ८ बालिकको उद्धार गरिएको जनाएको छ । सडकबाट उद्धार गरिएकामध्ये ११ देखि १४ वर्ष उमेरका ४ सय ८५ जना, ६ देखि १० वर्षका १ सय ४१ जना र ५ वर्ष मुनिका १४ जना बालिबालिका रहेका छन् ।
उद्धार भएकामध्ये ६ सय ९७ जनाको बाबुआमा दुवै जीवित रहेको तथा १ सय ११ जनाको बाबुआमा दुवै जीवित नरहेको देखिन्छ । सडकबाट उद्धार गरिए तापनि बालबालिका भागेर पुनः सडकमै फर्कने र सडकमा भारतबाट आएका बालिबालिका पनि रहने गरेको समस्या रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालिका बलात्कारको सिकार बन्ने क्रम बढेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९ सय ९५ बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए भने ०७५/७६ मा यो संख्या १ हजार ४ सय २० पुगेको छ । बलात्कारको सिकार भएकामध्ये २० दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् २ सय ९८ जना बालिका १० वर्षमुनिका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ सय २ वटा जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटना भएका थिए भने ०७५/७६ मा यो संख्या घटेर ३ सय ९९ पुगेको छ । प्रतिवेदनमा १० वर्ष मुनिका ६९ अर्थात् कुल घटनाको १७ दशमलव २ प्रतिशत बालिका पीडित भएको उल्लेख छ ।
बालबालिकाहरु अपराध र आपराधिक घटनामा प्रयोग हुने र बालबिझ्याँ (अपराध)का घटनामा वृद्धि भएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ बालसुधारगृहमा ३ सय ८२ जना बालिबालिका संरक्षणमा रहेका थिए भने यो वर्ष त्यो संख्या ८ सय २१ पुगेको छ । बालबिझ्याँमा संलग्न बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राख्ने गरिन्छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २७ जिल्लाका कारागारमा ६५ बालबालिका अभिभावकसँग आश्रित रहेकामा ०७५/७६ मा ८२ जना रहेको जनाएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले दुवै आमाबाबुको मृत्यु भई पारिवारिक अभिभावकत्वविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी लालनपालनसहित आधारभूत संरक्षणको व्यवस्था गर्ने तर्फ मन्त्रालय संवेदनशील रहेको जनाउनुभएको छ । हराएका, बेवारिस फेला परेका तथा अपहरणमा परेका बालबालिकाको तत्काल सकुशल उद्धार तथा संरक्षण व्यवस्थापनका लागि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको निशुल्क नं. १०४ तथा विविध कारणले जोखिममा परेका र विशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण व्यवस्थापनका लागि निशुल्क बाल हेल्पलाईन नं. १०९८ सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मीहरुले बालदुव्र्यवहार (पेडोफाइल) मा संलग्न विदेशी गिरोह नेपालमा सक्रिय रहेको तथा बालगृह खोलेर बस्ने गरेको तथा बालबालिकालाई धर्मपुत्र/धर्मपुत्री बनाएर विदेश लैजानेहरु धेरै रहेको तथ्य भेटिरहँदा नेपाल सरकारको प्रतिवेदनमा यी कुराहरु संलग्न नभएको गुनासो गरेका थिए ।